Iholeyili yeNdalo Umbala oMhlophe 3/4 Imisonto eJikiweyo 6-40mm iPolyester / intsontelo yeNayiloni yokuSebenzisa uMenzi kunye noMboneleli |Dongyuan
Intshayelelo: Ipolyester/intambo yenayiloni (PA) yiipholymide, banokuqina okulungileyo kunye namandla, ukuxhathisa ukugqoka, ubunzima obulula, inayiloniijijekileUkuxhathisa ukunxitywa kwentambo yeyona nto iphezulu.
Iimpawu:Intambo ye-nylon ineempawu ezintle ezibanzi, ezibandakanya iimpawu zomatshini, ukumelana nobushushu, ukumelana nobushushu, ukuxhathisa imichiza kunye nokuzithambisa, kunye ne-coefficient ephantsi ye-friction, i-flame retardancy ethile, kulula ukuyiqhuba, ifanelekile kwifayibha yeglasi kunye nezinye iifayili zokuzalisa ukuguqulwa kokuqinisa, ukuphucula ukusebenza kunye nokwandisa umda wesicelo.
Isicelo:ukuqala intambo yokutsalwa, intambo yokukhwela, intambo yokhuseleko, intambo yokutsala, intambo yokubopha, intambo yokuxhoma kwishishini, njl.
Umbala wendalo omhlophe 3/4 imisonto ephothiweyo 6-40mm i-polyester / intambo yenayiloni ukuze isetyenziswe
I-Coil/Roll, i-Spoon, i-hank/inyanda, i-reel
isetyenziswa njengomnatha weentlanzi kunye
intambo yebholiti, isilingi sentambo kunye nesecaleni kwesixhobo sokutsala.
iphezulu ekuchaseni ama-abrasions kunye nokukhanya kwelanga
1) Ukupakisha: I-Coil / Roll, i-Spoon, i-hank / i-bundle, i-reel okanye njengemfuno yakho.
2) Ukuhanjiswa: siya kwenza isicwangciso esinye seenkcukacha njengeodolo yakho
Le mveliso yenziwe ngezinto ezikrwada zeNayiloni ezikumgangatho ophezulu, ngokuzoba, umgca wokujija, ukwenza isitokhwe, kunye nokuluka kunye iinkqubo ezine.Kwaye intambo yenayiloni inokumelana nokunxiba kakuhle, ukuxhathisa ukubola kweekhemikhali, amandla okuqhawuka kakhulu, i-100% ye-polyamide yamasuntswana akrwada, ukumelana nobushushu kunye nentambo yokuloba yangaphandle ekwaziyo ukumelana ne-UV.
Iinkcukacha (ububanzi / inani leemitha / umbala) unokwenziwa ngokwezifiso.
Isicelo: Izixhobo zangaphandle, ukuhanjiswa, ukuhonjiswa, ukuxhoma iinqanawa, ukurhuqa, ukuloba elwandle, ukufuya eLwandle, njl.
1. Q: Lithini ixesha loRhwebo ukuba siyaThenga?
A: FOB, CFR, CIF, DDP (Door to Door), EXW Ikhona
2. Umbuzo: Yintoni i-MOQ?
A: Ukuba kwi-Stock yethu, akukho MOQ;Ukuba i-OEM, ixhomekeke kwizinto ozifunayo (Ngesiqhelo 1-3Tons).
3. Q: Liliphi ixesha eliKhokelo lokuvelisa ngobuninzi?
A: Malunga neentsuku ezingama-20-30 zokuhanjiswa, ukuba ufuna kwangaphambili, nceda uxoxe nathi.
4. Umbuzo: Ndingayifumana isampuli?
A: Ewe, singanikezela ngesampulu simahla ukuba sinempahla esandleni;ngelixa intsebenziswano yokuqala, kufuneka intlawulo yakho ecaleni ngeendleko ezicacileyo.
5. Umbuzo: Ngaba ungayifumana imali?
A: Ewe, SiyiFactory enelungelo lokuthumela ngaphandle, ngoko ke asikwazi ukufumana kuphela i-USD $ kodwa kunye ne-RMB evela kumazwe angaphandle okanye i-China yendawo.
6. Q: Ngaba ndingenza ngokwezifiso ngokwesayizi esiyifunayo?
A: Ewe, wamkelekile ukwenza ngokwezifiso, ukuba akukho mfuneko ye-OEM, sinokunikezela ngeesayizi zethu eziqhelekileyo zokhetho lwakho olungcono.
Nceda uzive ukhululekile undazise ukuba kukho nawuphi na umbuzo.
Ngaphambili: Amandla Okuqina aphezulu anemibala ye-PE 3-Strand Twisted Rope
Okulandelayo: ISTOCK!INTENGISO EZENTSWAYO !Polypropylene PP danline 3 / 4 imisonto ephothiweyo intambo PP edadayo
12 Intambo ephothiweyo yaseStrand
25 mm Intambo
3 Intambo yeStrand
3 Intambo yeNayiloni ephothiweyo yaseStrand
8 Intambo yePolysteel yeStrand iyathengiswa
Intambo yeNayiloni eLukiweyo
Intambo yePolypropylene ephothiweyo
Intambo yeNayiloni yaseTshayina
Umbala weNylon Twine
Ukuloba Intambo yeNayiloni
Ukuloba iNylon Twine
Intambo edadayo yokukhwela isikhephe
Umgobo weNtsontelo yeNtsontelo yePolyethylene
IiNtsontelo zokuLoba iminatha
Inayiloni yokuphakamisa iNtsontelo
Intambo yaselwandle Hauler
Intambo yesikhephe seNayiloni
Intambo yenayiloni 8mm
Intambo yeNayiloni yokuLoba
Intambo yePlastiki yeBraid
IPlastiki yokuPakisha iTwine
IPlastiki yeStraw yeNtsontelo yeTwine
Polypropylene Intambo 10mm
Polypropylene Intambo 16mm
Intambo ejijiweyo emnyama